Sida loo soo dir Ringtone to Your Phone
Inta badan telefoonada gacanta ha isticmaala in ay si toos ah u soo bixi ringtones ka taleefannadooda. Laakiin waxa haddii aad u arkaa in ay ku haboon inaad kala soo baxdo ringtones la computer desktop aad? Ma taqaanaa sida aad maamuli kartaa in ay wareejiso telefoonka gacanta? Waxaa jira dhowr siyaabood oo taas loo sameeyo, iyo waa ay fudud oo dhan si ay u qabtaan! Maqaalkani waxa uu ku bari doonaa sidii ay u soo diri ringtones aad jeceshahay in aad telefoonka mobile dhib la'aan.
Habka 1: Iyadoo TunesGo Wondershare
Habka 2: Iyadoo Uniring
Habka 3: Iyadoo ay RingerDrop
Habka 1: Iyadoo TunesGo Wondershare: Download oo si deg deg ah si aad telefoon wareejiyo ringtones aad ugu jeceshahay.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo ringtones mobile laga helo suuqa hadda maalmood. Inkasta oo aad si fudud toos ah kala soo bixi kartaa ringtone ah ee doorashada aad jeceshahay ka telefoonka, dad badan oo jecel in ay u qabanayaan via ay laptop / computer. Si kastaba ha ahaatee haddii aad ku fakartid in aad kala soo bixi ringtones ka your computer, mid ka mid ah dhibaato weyn oo la soo wajahay waa in la diro ringtones in mobile aad . Waxaa jira siyaabo badan oo sida xaqiiqada ah si ay u gaaraan hawshan. Isticmaalka soo saarka xisbiga saddexaad software sida Wondershare TunesGo xaqiiqdii waa mid ka mid ah habka ugu fudud oo dhaqso ah si ay u soo bixi oo ka your computer wareejiyo ringtone aad jeceshahay in aad telefoonka!
TunesGo Wondershare waa aalad utility heer sare ah oo lagu kalsoonaan karo oo waxtar leh in la beddelo doonaa sida aad u isticmaasho maktabadda music aad. Waxay siisaa tiro ka mid ah functionalities faa'iido leh oo kaa caawin kara dadka isticmaala si ay u maamulaan sida ay wadaagaan oo ay isticmaalaan files music ay. Software waxaa laga heli karaa labada dhufto ee Windows iyo Mac.
Wondershare TunesGo - Download, Bedelka iyo Maamul Music for Your macruufka / Android Devices
Bedelka music ka mid qalab mid kale oo aan ka werwerayn oo ku saabsan waafaqsan qalabka
Hel music aan xad lahayn oo lacag la'aan ah u taageeraya 1000+ goobaha si ay u soo bixi
Talaabooyinka si ay u gudbiyaan Ringtones ka Computer si ay Phone la TunesGo
Tallaabada 1 Daahfurka Wondershare TunesGo
Tallaabada ugu horeysay waa in aan bilowno TunesGo Wondershare. Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo labo gool oo midi gujinaya ay icon ama iyada oo la isticmaalayo la eego menu xaq-click ah.
Tallaabada 2 Connect qalab Android aad
Marka aad bilaabay TunesGo Wondershare ah, tallaabada xigta waa in lagu xiro aad telefoon si kombiyuutarka. Waxaad xiran kartaa qalab Android aad via cable USB ah. Marka aad ku xiran qalab aad, TunesGo si toos ah waxaa lagu ogaan doonaa.
Tallaabada 3 Dooro fursadaha phone Android
Marka aad telefoon ayaa lagu ogaan TunesGo Wondershare, tallaabada xigta waa in ay doortaan "Music" ikhtiyaarka ka android qaybta phone. Waxaad u leeyihiin in ay doortaan "Music" doorasho si aad u aragto liiska oo dhameystiran ee files music hore u deggan ee aad taleefan. Optionally, waxaad dooran kartaa in la helo oo soo bixi ringtones aad jeceshahay si xor ah uga soo websites la TunesGo Wondershare.
Tallaabada 4 dooro "Add" button
Tallaabada xigta waa in la isticmaalo "Add" badhanka ku yaal sare ee interface ka. Dhag siinaya batoonka this furi doonaa labo ikhtiyaar: "Add file" iyo "Add gal". Waxaad isticmaali kartaa "Add file" doorasho si ay u bilaabaan wareejinta music ka PC in aad telefoon.
Talaabada 5 Meel music aad kombuutarka
Marka aad guji "Add file" doorasho, waxa aad si aad sahamisa file qaadan doonaa. Waxaad dooran kartaa music la rabay ka sahamisa hadda. Marka aad hubto oo ku saabsan file aad rabto in lagu wareejiyo, double u riix si aad u bilowdo ay kala iibsiga si aad telefoon.
Tallaabada 6 Check u kala iibsiga guul
Marka aad samayso doorashada, aad kala iibsiga ka bilaabi doona iyo faylka la doonayo in lagu wareejin doonaa telefoonka waqti. Waxa kale oo aad ka hubin kartaa file u wareejiyay, waxaa lagu soo bandhigi doonaa midab cagaar ah meesha ugu hooseysa.
Wondershare TunesGo xaqiiqdii waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican ee ringtones wareejiyo aad telefoon si fudud oo dhaqso.
Universal Ringtone Converter ee Uniring waa barnaamij software oo ogolaanaysaa user telefoonka gacanta si ay u gudbiyaan ringtones si fudud oo si deg deg ah uu uga digeen galay ay laxamiistaha ringtone dhisay-in aan u baahan fiilooyin cable ama adeegyada SMS qaali u ah.
Tallaabada 1 Tag Uniring
Uniring waa software web-ku salaysan in badasha wax ringtones Nokia RTTTL in qaab kasta waa la jaan qaada magac kale gacanta mobile. Adeegani waa lacag la'aan iyo aadan u baahan yihiin inay iska diiwaan gelin si aad u isticmaasho.
Tallaabada 2 Dooro qaabka
Hoos waxaad ka arki doontaa liiska fursadaha ee xaggee baad tegaysaa si loogu badalo aad RTTTL, ee ka dooro mid ah in in uu yahay ugu socon kara qaybta phone aad isku xirta link.
Tallaabada 3 Hel Strings of Code
Ka dib markii doorashada haddii aad doorbidayso, Uniring tusi doonaa hal ama in ka badan xadhig ah code oo muujinaya "Message 1," "Fariinta 2" iyo wixii la mid ah. Taasi waxa ay noqon doontaa ringtone ee aad telefoonka. Si aad nuqulka iyo file qoraalka paste, waxaad isticmaali kartaa sabuurad computer aad.
Riix halkan , ka dibna aad u astaysto kartaa ringtone. Waxaad edit karaa Isbadalo, garoonka, oo dhererkiisuna wuxuu fariin SMS ugu badnaan (haddii aad diinta aad ringtone in qaab Binary Nokia)
Talo: Haddii aad qabto ama aad rabto in aad goobta Converter ringtone u gaar ah oo ay isticmaalaan Converter Uniring, waad u isticmaali kartaa korkiisa weydiisanaya ogolaansho, email u soo dir oo kaliya cellphones.guide@about.com.
RingerDrop.com waa software web-ku salaysan bilaabay sanadkii 2008 u ogolaanaya dadka in qayb ka mid ah dunida oo dhan inay si fudud ku wareejiso ringtones kasta oo ay jecel yihiin kuwa badbaadaya on kombiyuutarada ay u telefoonada gacanta si fudud in aan u baahnayn hardware kasta. Waxay sidoo kale bixiyaan liis dheer oo ringtones aad si toos ah u soo bixi kartaa ka website iyo soo dirto si ay telefoonka gacanta.
Website-kani taageertaa badan oo ay ka mid yihiin qaabab ringtone midi, regelingen, mp3, iyo ringtones Nokia. Waxa kale oo ay u taageeri karaan wax side telefoonka gacanta iyo inta aad u leeyihiin a web browser mobile iyo caymiska mobile, aad ku fiican tahay inuu tago!
Halkan sida loo isticmaalo adeeggan:
Tallaabada 1 Nooca In Your Mobile Phone Number
Waxa ugu horeeya ee aad samaynaysaa waa nooc nooc ee lambarka 10 lambar, hubi in uu yahay kaliya 10! Haddii aad leedahay dhowr ah oo mobile in ay ka badan tahay 10 lambar oo aad ka heli this wareer, tirtirto tirada xad-dhaaf ah tan iyo bilowgii lambarka mobile. Tusaale ahaan, lambarka waa + 63926-603-0144, tirin ilaa 10 ay ka harsan tahay, iyo tirtirto wixii tagay, sidaasi darteed waxa ay noqon doontaa 926-603-0144.
Tallaabada 2 Dooro Waxaad Carrier Phone
Halkan waxa aad ka soo xuli doona magaca side network telefoonka gacanta, riix hoos u soo dhaadhacay arrow oo waxaa la siin doonaa liiska sidayaal network ku salaysan oo dalka Mareykanka ah aad. Laakiin ha ka welwelin haddii aad ka qayb kala duwan ee dunida maadaama ay tani waa mid caalami ah qof walba heli karo! Sidaas, haddii aadan magaca side network mobile arko, kaliya dooran 'waxaan ahay baxsan USA ah'.
Tallaabada 3 geliyaan Your Ringtone
Halkan waxa aad ka dooran doonaa faylka ama ringtone in aad internetka ku soo bixi ama aad naftaada ka dhigay in ay u diraan si aad telefoon. Just riix badhanka Dooro File oo aad folder file a arbushin doonaa, kaliya dhirtuba dooro file aad rabto in aad u soo dir telefoonka, oo ay sii wadaan in ay tallaabo la soo dhaafay.
Tallaabada 4 Upload Ringtone
Oo tallaabadii u dambaysay, riix ringtone Upload iyo sugto faylka gaaray dalka telefoonka gacanta. Waxa laga yaabaa in waxoogaa ku qaadano sababta oo ah website weli ay abuuri doonaan habdhaqameedka si la idiin soo diray, laakiin ha ka welwelin, sababtoo ah waxaa inta badan laguma qaadan aad u dheer. Haddii ay dhacdo in aadan heli soo diray ku saabsan telefoonka, iska hubi in warbixinta aad ku riday iyo in la hubiyo tirada iyo side ayaa lagu wadaa si sax ah.
Talo: Qaado ogow in la isticmaalayo RingerDrop taas gabi ahaanba waa bilaash ah; Si kastaba ha ahaatee, aad side network mobile laga yaabaa dallacdo ujro yar load credit aad u hesho SMS la link ringtone ah.
Diritaanka ringtones jecel cusub si aad u telefoonka gacanta waa u fududahay sida 1, 2, 3, mahad technology iyo dadka Yeelay ringtones diraya in ay naga telefoonka mobile sahlan oo suurtagal ah. Ma aha in aad si waqti dheeraad ah oo raadinaya aad cable silig ama amaahda ama iibsashada mid, sababtoo ah hadda, waxa aad samayn kartaa adigoo qasabno oo kaliya dhowr aad mouse iyo keyboard.
Top 30 jaraya Ringtone u Platform kasta
Top 30 Shabakadaha in Download Free Ringtones
Sidee inuu ka soo kabsado Videos ka Canon Vixia fiidiyo
Sida loo dar SRT in DVD
Freeware Video Downloader: Download Free YouTube Videos in Click ah
Sidee ku cadaadisaa wmv Files in Windows & Mac
> Resource > Video > Sida loo soo dir Ringtone to Your Phone